Archive du 11-juin-2021
Ady amin’ny Covid 19 Vita vaksiny Ravalomanana sy ny TIM
"Zava-dehibe ny miaro ny aina. Tsy misy azo atao hiarovana amin’io valanaretina io raha tsy ny fanefitra, izay tsy inona fa ny vaksiny,
Heverina ho mpanenjika hatrany
Hindramina kely ny fanehoan-kevitry ny olompirenena tao anaty tambazotran-tserasera tao rehefa
Fanolanana faobe Lehilahy 3 no tratra tany Menabe
Lehilahy miisa 3 no saron’ny Polisy avy ao amin’ny kaomisarian’i Menabe ny alarobia 09 jona lasa teo.
Kaominina Ivato Namaly ny hetahetan'ny mponina ny filoham-pirenena
“Tsy misy Kaominina ho hadino amin'ny fampandrosoana intsony fa ny fiaraha-miasa no hitondrana ny fampandrosoana ho an’ny rehetra”.
Covid 19 Madagasikara Lehilahy ny 65%-n’ireo marary
Lehilahy ny 65%-n’ireo olona lasibatry ny valan’aretina Covid 19 hatramin’ny fotoana nisiany teto amintsika .
Fetin’ny mozika 2021 Hanandratana mpanakanto vao misondrotra
Hiavaka indrindra amin’ny hatrizay ny fetin’ny mozika amin’ity taona 2021 ity, izay hanomboka ny 14 ka hatramin’ny 21 jona izao,
Ady amin’ny Covid-19 Karine no hanamarinana fa natao vaksiny
Eny, karine no hanamarinana fa vita vaksiny iadiana amin’ny Covid-19 ny olona. Tranga mampahatsiahy ny fampiasana karine
Rajoelina sy Coach Rabe Mangatsiatsiaka ny fifandraisana
Nitokana ny kianja vaovao teny Ambohidratrimo ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina omaly.
Jeneraly Ravalomanana “Tsy nahalala izahay hoe handeha hividy mofogasy izy”
Nilaza omaly ny Sekreteram-panjakana Miadidy ny zandarimariam-pirenena Jeneraly Ravalomanana Richard,
Tetikasa Flyover Tsy maintsy hisy fandravana trano eny Anosizato
Hifarana ny 15 jona 2021 ho avy izao ny fanadihadiana natao teny amin’ireo mponina voakasiky ny tetikasa flyover eny Anosizato
Nosy manodidina Noraketina ho valan-javaboahary Frantsay ny Nosy sambatra
Mandeha ny mandeha, hoy ny fitenenana. Isika Malagasy variana amin’ny fifaninanana eo amin’ny filoha teo aloha sy ankehitriny
Coronavirus 1 maty, 54 ny tranga vaovao
54 ireo trangana coronavirus vaovao ny 9 jona teo, izay nisy fiakarany satria 28 ny teo alohany. Fitiliana 517 no nahitana an’ireo,
Vehivavy mpisoloky Nahatratra 65 tapitrisa Ar ny vola efa naodiny
Tsy latsaky ny 15 isa ny fitoriana azon'ny polisy mahakasika ity vehivavy malaza amin’ny fisolokiana hitantsika amin’ny sary ity.
Berija Ravelomanantsoa Andrasana anio ny didim-pitsarana
Taorian’ny fiemorana farany teo dia andrasana amin’ity anio 11 jona 2021 ity indray etsy amin’ny lapan’ny fitsarana etsy Anosy